इन्फोग्राफिक मार्केटिंगको शक्ति ... एक चेतावनीको साथ | Martech Zone
इन्फोग्राफिक मार्केटिंगको शक्ति ... एक चेतावनीको साथ
आइतबार, अक्टोबर 5, 2014 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यो प्रकाशन र हामीले ग्राहकहरूको लागि गर्ने धेरै जसो दृश्य सामग्री समावेश गर्दछ। यो काम गर्दछ ... हाम्रो दर्शकहरु धेरै बढेको छ दृश्य सामग्रीमा फोकसको साथ र हामीले हाम्रा ग्राहकहरूलाई भिजुअल सामग्रीसँग उनीहरूको पहुँच बढाउन मद्दत गरेका छन मिक्सको एक अंश।
यो एक मा इन्फोग्राफिक जुन मार्केट वर्चस्व मिडिया दृश्य सामग्रीको शक्ति प्रदर्शन गर्न सिर्जना गरिएको हो। यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि उपभोक्ताहरूले दृश्य मार्केटिंगमा राम्रो प्रतिक्रिया दिन्छन्, र यो एउटा कारण हो कि इन्फोग्राफिक्स अनलाइन मार्केटिंगको लोकप्रिय र प्रभावी फाराम बनेका छन्। तिनीहरूले तपाईंलाई जानकारी प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छ कि तपाईंको श्रोताले तपाईंको सन्देश अवशोषित गर्दछ, केवल पाठको ब्लकहरूको माध्यमबाट स्किमिंग गर्नुको सट्टा र सूचनाको एकदम थोरै प्रतिशत मात्र कायम गर्दछ।
दृश्य सामग्री चेतावनी
इन्फोग्राफिक्स जस्तै भिजुअल सामग्री टुक्रा एक को लागी एक आवश्यक हो प्रभावी सामग्री रणनीति तर मात्र यदि तिनीहरू एक अनुकूलित प्लेटफर्ममा प्रस्तुत छन् कि यसले गहिरो सment्लग्नतालाई मद्दत गर्दछ र रूपान्तरणको लागि अवसरहरू। मेरो मतलब के हो?
सम्बन्धित पाठ पर्याप्त छ कि तपाईं तपाईंको दृश्य सामग्री हुन मद्दत गर्दछ खोज इञ्जिनहरू द्वारा क्रमबद्ध? तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि हामी जहिले पनि हाम्रा इन्फोग्राफिक्सहरूलाई जानकारीमूलक पाठको साथ लपेट्छौं। त्यसो हो भने खोजी ईन्जिनहरूले पृष्ठलाई सामग्रीमा हल्का र रैंकिंगमा उपेक्षाको रूपमा देख्दैनन्। जबकि इन्फोग्राफिक्समा अक्सर सामग्रीको एक टन हुन्छ, गुगलले इन्फोग्राफिकको भित्र सामग्री इन्डेक्स गर्दैन, तिनीहरूले यसको वरिपरि सामग्री हेर्दछन्। म्याट कट्सले केहि बर्ष पहिले चेतावनी दिएका थिए कि लिंकहरू र लोकप्रियता इन्फोग्राफिक्स खोज इञ्जिनहरू द्वारा छुट गर्न सकिन्छ (आईएमओ, त्यो बेवकूफ हुनेछ र म शंका गर्दछु यो कहिले हुन्छ)।
त्यहाँ छ कार्यलाई कल गर्नुहोस् इन्फोग्राफिकमा? यो केवल एक इन्फोग्राफिक पढ्नको लागि पर्याप्त छैन र कसले यो बनायो भनेर लोगो हेर्नको लागि, खरीद प्रक्रियामा पाठकलाई अर्को चरणमा लैजान तपाईंसँग कस्तो रणनीति छ? हामी अक्सर इन्फोग्राफिकहरू गहिरा सामग्री जस्तै ह्वाइटपेपरमा प्रचार गर्न वा ग्राहकहरूको साइटमा कुनै प्रकारको रेजिष्ट्रेसनलाई प्रोत्साहित गर्न जारी गर्दछौं।
त्यहाँ छ एक प्रस्तावको साथ अवतरण पृष्ठ कि CTA ले यातायात ड्राइव? के त्यहाँ पाठकहरूलाई ईमेल वा न्यूजलेटरमा साइन अप गर्न सदस्यता फाराम छ? के त्यहाँ अन्य सम्बन्धित पोष्टहरू वा इन्फोग्राफिक्स छन् जुन ल्यान्डि page पृष्ठमा साझा गरिएको छ ताकि तपाईं पाठकको गहिराइमा ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ?
तिमीलाई कस्तो छ प्रभाव मापन दृश्य सामग्री साझा भइरहेको छ? हामीसँग चिन्ता गर्दैनौं यस पाठलाई प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस् इन्फोग्राफिक मुनिको बक्स जुन एक ब्याकलिink्क जबरजस्ती गर्न कोशिस गर्दछ। इन्फोग्राफिकमा हाम्रो सीटीएको साथ, हामी अक्सर Bit.ly जस्तो लि link्क शोर्टनर प्रयोग गर्दछौं जसले हामीलाई इन्फोग्राफिकद्वारा उत्पन्न प्रत्यक्ष गतिविधि मापन गर्न मद्दत गर्दछ।
कसरी र कहिले हो? इन्फोग्राफिक प्रमोट गर्दै? हामी हाम्रा इन्फोग्राफिक्सहरू हाम्रा ग्राहकहरूलाई ल्यान्डस्केप पीडीएफ ढाँचामा वितरण गर्दछौं जुन स्लाइडशारे र को लागी उपयोगी छ हामी इन्फोग्राफिक प्रचार गर्छौं सबै ग्राहकहरूको सामाजिक च्यानलहरू, हाम्रो सामाजिक च्यानलहरू, र अक्सर ग्राहकको सार्वजनिक सम्बन्ध फर्म प्रासंगिक साइटहरूमा इन्फोग्राफिक पिच छ। इन्फोग्राफिकको सिर्जना पर्याप्त छैन, तपाईंसँग पदोन्नति रणनीति हुनुपर्दछ। र हामी यसलाई बढि बढि प्रचार गर्नेछौं ... केवल एकल अभियान मात्र होईन।
यो इन्फोग्राफिकले वर्णन गर्दछ किन दृश्य सामग्री प्रभावकारी, आकर्षक, र विश्वस्त छ। यो एक इन्फोग्राफिक रणनीति को सफलता बोल्छ र किन तपाइँको व्यवसाय इन्फोग्राफिक मार्केटिंग विचार गर्नुपर्छ। इन्फोग्राफिक मार्केटिंग आकर्षणको लागि एक अद्भुत रणनीति हो, तर तपाईंसँग सम्बन्धित रणनीति हुनुपर्दछ राख्दै र रूपान्तरण गर्दै यातायात तपाईंले आकर्षित!
टैग: DK New Mediaइन्फोग्राफिक मार्केटिंगइन्फोग्राफिक पदोन्नतिइन्फोग्राफिक रणनीतिसूचनाात्मक ग्राफिक्सबजार वर्चस्व मिडियामार्केटिंग इन्फोग्राफिक्सदृश्य सामग्री
तपाइँको व्यवसायलाई मद्दत गर्न कसरी सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्ने